China umoya opholileyo wamanzi opholileyo ovelisa umatshini mveliso kunye nabenzi | UAntai
1) Ixhotywe ngebhokisi yolawulo oluzenzekelayo lweZJL. Kwimeko yokusilela kolawulo oluzenzekelayo, ungatshintshela kwimowudi yolawulo ngesandla.
2) I-alloyum ephezulu ye-aluminium eqine. Xa uxinzelelo lufikelela kwi-2Mpa, yenza kuphela ukubonakala okungabonakaliyo.
3) isixhobo esomeleleyo sokubotshwa kwesinyithi, uyilo olukhethekileyo lolwakhiwo, olukhuselekileyo noluthembekileyo.
4) Impompo yamanzi yombane, yonga ixesha kwaye ubhetyebhetye ukulawula uxinzelelo lwe-vulcanizing. Yenza isuti efanayo ye-vulcanizer yeprojekthi yokuhambisa ibhanti eyahlukeneyo (inkqubo yoxinzelelo lomoya ngokuzikhethela).
5) isixhobo soxinzelelo sisebenzisa ibhegi yoxinzelelo lwe-rubber, ukugcina ubunzima be-80% kune-platen yesiko. I-Flexible rubber bladder ibonelela ngoxinzelelo olufanayo kunye nokusebenza okuphezulu. Luphumelela kuvavanyo lokuseta uxinzelelo lwe-2.5 MPa kwaye lube lolona xinzelelo luthandwayo.
I-6) Uhlobo lweAlmex lokufudumeza ingubo, ipleyiti yokufudumeza yonke eyenziwe yintsimbi yealuminium. Ukutyeba yi-25 mm kuphela, ukunciphisa ubunzima kunye nokugcina amandla. Ifuna kuphela malunga nemizuzu engama-20 ukunyuka ukusuka kubushushu begumbi ukuya kwi-145 ° C.
7) Yakha-ngaphakathi inkqubo yokupholisa amanzi, ukusuka kwi-145 ukuya kwi-70 ℃ ifuna kuphela imizuzu eyi-15-20.
Ububanzi beBelt (mm)
I-SVP-650 * 830
I-SVP-650 * 1000
I-SVP-800 * 830
I-SVP-800 * 1000
I-SVP-1000 * 830
I-SVP-1000 * 1000
I-SVP-1200 * 830
Ngo-1950 * 930 * 1000
I-SVP-1200 * 1000
Ngo-1950 * 1100 * 1000
I-SVP-1400 * 830
I-SVP-1400 * 1000
I-SVP-1600 * 830
I-SVP-1600 * 1000
I-SVP-1800 * 830
I-SVP-1800 * 1000
I-SVP-2000 * 830
I-SVP-2000 * 1000
I-SVP-2200 * 830
Ngama-2950 * 930 * 1100
I-SVP-2200 * 1000
Ngama-2950 * 1100 * 1100
Kukucoca izixhobo kunye nezixhobo zokulungisa kunye nokusongela ibhanti yokuhambisa.
Ifanele ibhanti yokuhambisa eyahlukeneyo, enje nge-EP, ngerabha, ngenayiloni, ngelaphu kunye nebhanti yentsimbi, njl.
Egqithileyo Ibhanti yokuhambisa ipapashwa ngokucinezela ishushu
Okulandelayo: Ijenali yeVulcanizing engasindi yeLibhu yokuhambisa iRubber
Yengubo ngerabha yokuthutha Belt Joint Vulcanizer
Irabha swa swa Belt Ukujoyina Machine
Irabha yokuhambisa Belt Vulcanization Machine
Irabha yokuhambisa iBelt Vulcanzing Press
Intambo yentsimbi yerabha yokuhambisa ibhanti yeVulcanizer edibeneyo